CABBAGE KALE: SIDA LOO ABUURO IYO U KORAAN KAABAJKA BEERTA BEERTA IYADA OO LOO MARAYO GEEDO - KAABASHKA SII KORDHAYA
Ugu Weyn Ee Kaabashka sii kordhaya
Kaabashka, Kaabashka kale, Kaabashka Ruushka ah, Jarmal, Dutch, Brauncol (Brunkol ama Grünkol) - kuwaas oo dhan waa noocyo kala duwan oo loo yaqaan 'naadir', oo aan si wanaagsan loo garanayn, laakiin aad u faa'iido leh, nafaqo leh oo si sahlan loo cuno kaabash oo aan sidoo kale u baahnayn daryeel gaar ah, si fudud u dulqaadanayo dhaxan iyo xitaa u koraan karaa sida a perennial. Maxay yihiin doodo kale oo loo baahan yahay si ay u abaabulaan sariirta beerta agagaarkan leh dhirtaas?
Braungol waxay u egtahay mid aad u xiisa badan waxayna u egtahay sida salad foorno furan ka badan khudradda. Midabka caleemaha cufan ee dhirtu waxay isku mid noqotaa saladhka - waxay noqon karaan kuwo cagaaran oo cagaaran ama guduud ah. Sida lagu sheegay, warshadani ma lahan madax (magaca Laatiin ah ee warshadda ee adag tahay in lagu turjumo sida "aan lahayn lifaaq"), iyo afkuna waa adag tahay, sidaas darteed caleemaha iftiinka iyo jilicsan ayaa loo adeegsadaa cuntada, taas oo si wacan ula qabsanaysa toonta, khudradda kala duwan, nuts, iyo dharka - leh majones, saliidda cuntada, labeen dhanaan, liin iyo xitaa shimbir khafiif ah. Sida kaabajka caadiga ah ee cadaanku, kale waa la kariyaa, la kariyaa, la kariyaa, xitaa la shiilay, laakiin waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo saliid saladh ama tuff, maxaa yeelay daaweynta kulaylku waa cadowga ugu weyn ee ascorbic acid, iyo vitaminkani gaar ahaan qani ku ah brauncole.
Ma taqaanaa? Si ka duwan sida kaabajka, noocyada kale ee kaabajka ah ee nala yaqaan, kale waa warshad "dib loo isticmaali karo": ka dib markaad jarjartid caleemaha brauncol ee saladh vitamin, dhirta ayaa sii deyn doonta kobcin cusub oo cusub, si aad uga soo goosato waliba duur kasta inta lagu jiro xilliga iyo mar kale.
Marka laga soo tago badi fitamiinada, kaabajka kaabajka ah ayaa leh waxyaabo badan oo faa'iido leh, gaar ahaan, marka la barbardhigo ehelka ugu dhow ee dhirta, noocyada noocan ah waxaa lagu talinayaa in ay jimicsi sameeyaan, sababtoo ah waxa ku jira qadar badan oo ah borotiinka, acids-3 fatty acids, iyo calcium, taas oo lagama maarmaan u ah qalfoofkayaga.
Kaabashka kale ee sii kordhaya iyada oo loo marayo geedo
Waxaa jira laba siyaabood oo ay u koraan kaabajka kaabajka: si toos ah uga soo baxa abuurka iyo geedo. Dabcan, caabbinta barafka ee dhirta waxay u ogolaataa in si dhakhso ah loogu beeray dhul furan, daboolaya filim nabadgelyo leh, laakiin waxaan kuu sheegi doonaa wax badan oo ku saabsan sifooyinka kala duwan ee labaad.
Doorashada noocyo kala duwan oo ku haboon cimiladaada
First of dhan, waxaa lagama maarmaan ah in la go'aamiyo nooca Bruunkol aan ku beeri doonaa, sababta oo ah kaabajka Kale leeyahay noocyo badan oo kala duwan, iyo tani waa faa'iido dheeraad ah: Waxaad mar walba dooran kartaa mid ka mid ah ugu habboon u site aad.
Tusaale ahaan, Premier ama Siberian Kale waxay ku habboon yihiin cimilada qabow - labadaba noocyadaas waa kuwa udheer udgoon, marka lagu daro tan ugu horreysa, si degdeg ah ayey u koraan, laakiin labaad waxay u adkahay cudurada iyo cayayaanka. Red Kale waxay leedahay sifooyin isku mid ah, waxaa lagu beeray karaa marka lagu daro mid ka mid ah noocyada kor ku xusan si ay u awoodaan inay ku darsadaan saldhigga furfuran ee furfuran oo saladh ah.
Haddii boosku uu ku yaryahay aaggaaga, dooro dheer (Dino Kale, oo loo yaqaan Latsinato leh caleemo dhuuban, Reed Cane) ama noocyo kakan oo kaabash ah (ka sokow, caleemaha caleenta caleenta gaar ahaan jilicsan iyo macaan) .
Kuwa aan awoodin inay ka baqdaan qabowga oo aan meel badbaadin, marka lagu daro kor ku xusan, waxaa sidoo kale la soo jeediyaa si tartiib tartiib ah cawska cagaaran ama casaan "Redbor", iyo ka sii fiican - labadaba.
Doorashada awooda iyo carrada
Iyada oo la xayiray kala duwan, diyaarinta dheriyo iyo ciidda isku dar ah.
Kaabashka ma aha warshadda ugu khatarta badan, sidaa daraadeed, waxa fiican in la doorto awooda waaweyn ee geedo isla markiiba, iyo in la abuuro miraha yaraa, si aanad uga takhalusin geedo qumman oo macquul ah sababtoo ah waxay faragelinayaan horumar kasta oo kale. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad weli dhuubisaa geedo, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad diyaar u noqoto tan. Waa mid aad u haboon in lagu koro Bruunkol khaas ah oo loogu talagalay geedo, laakiin haddii aysan jirin, baayacmooyin caag ah oo ballaadhan oo leh dhinacyada 5-10 cm ee dhererka.
Ma taqaanaa? Mucaaradka Archeological waxay tilmaamaysaa in dadku bilaabeen inay isticmaalaan kaabajka tan iyo maalmaha Dhagaxley iyo Gubashooyinka.
Warshadda aynu ku soconayno, heerka pH ee ciidda waa in ay kala duwanaadaan inta u dhaxeysa 5.5-6.8.
Si loo beero abuurka geedo, waxaa wanaagsan in isla markiiba la qaato ciidda of acidity loo baahan yahay, laakiin xaaladdan waa in sidoo kale la kulmay marka dhirta waxaa lagu beeray dhulka u furan: haddii ciidda uusan buuxin shuruudaha, waa in "la hagaajiyey" - acidified ama, liddi ku ah, hoos u.
Waa muhiim! Kaabashka Kale ee koray ciidda oo cokan leh ciid ama dhoobo ayaa lumisa dhadhanka iyo koritaanka ka sii daraysa.
Iyo, dabcan, ciidda waa inay ahaato mid bacrin ah si aad u hesho goosashada wanaagsan, sidaas darteed haddii aadan iibsan isku dar ah nafaqo-karis ah ee dukaanka, ku dar compost, humus iyo arrimaha kale ee organic si dhulka.
Waxaan bilaabeynaa inaan diyaarinno geedo qiyaastii lix toddobaad ka hor dhammaadka dhaxan, kiiskan, ka hor inta aan laga beerin dhulka, furfaha ayaa si fiican loo xoojin doonaa isla markaana wakhti aan kicinaynin, maxaa yeelay waxay ku sii adkaan doontaa geedo si ay ugu bislaadaan meel cusub.
Cucumber, dill, digirta, baradhada, sage, radishes, toon, digir, chard, xididdo, isbinaajka, iyo celery waa derisyo kaabash wanaagsan.
Diyaarinta daaweynta abuurka ayaa loo baahan yahay. Si arrintan loo sameeyo, xal daciif ah ee Kansar dhalaanka waa ku habboon yahay, laakiin waxaa fiican inaad iibsato xididada gaarka ah. Isku dey la diyaariyey oo dhulka hoostiisa ku shub biyo yar oo diirran.
Si taxadar leh u samee abuurka iyo iyaga ku rusheeyaa dusha lakab-inch oo ah isku dar ah ciidda, ka dibna leh taxaddar kasta oo qoyan ciidda.
Demi dhulka dusha sare ee dhalada ka dibna meel u dhig meel wanaagsan oo iftiin leh.
Ilaa ay timaado caleemaha, waxaanu hubinno in ciidda uusan qalajin, laakiin halkii ay ka waraabin lahayd waxaan isticmaalnaa buufinta. Daryeelka saxda ah ee beeritaanka wuxuu ka tarjumayaa in laga fogaado cirridka dhulka, sababtoo ah haddii kale waxaa jira feejignaan sareeya in seedling ay saameeyeen "lugtii madow". Taasi waa sababta ay lagama maarmaan u tahay in lagu beero abuurka ciidda si fiican u qoyan, laakiin ka dibna waraabinta waa in la bixiyaa.
Ma taqaanaa? Halyay la xidhiidha asal ahaan kaabajka, ayaa sheegay in dhididka dhididka loo qodey dhulka oo laga soo qaaday madaxa godka Jupiter. Laga soo bilaabo iyaga ka soo baxday kaabash.
Sida ka soo baxa caleemaha u baahan yihiin in ay khafiifiyaan, ka tago sprouts xoog leh fogaan ah oo ku saabsan 2 cm midba midka kale.
Dhowr usbuuc ka dib markii biqilka, geedo u baahan yihiin in la ruxruxo - waa in lagu fadhiisto dheriyo kala duwan (dhererka ugu wanaagsan iyo dhexroorka sida weel sida 5 cm), hal seedling kasta. Hannaankani ma aha mid khasab ah, si kastaba ha ahaatee, waxaa la ogaaday in ka dib markii picking, geedo noqdaan kuwo xoog leh oo si fiican u dulqaadashada beerto ee dhulka u furan.
Waa muhiim! Fogaanta badan ee iftiinka - qayb muhiim ah ee daryeelka geedo kaabajka, haddii loo baahdo, waxaa xataa lagu talinayaa in la muujiyo dabiici ah.
Geedashada geedo kaabajka ah ee dhulka u furan
Wixii geedo beerto on sariirta waa lagama maarmaanka ah in heerkulka ciidda si joogto ah loo hayaa heerarka of aan ka yarayn 15 darajo.
Markaad dooranaysid meel bannaan oo beerta, iskuday inaad joojiso doorashada dusha buur ama ugu yaraan hubi in ciidda uu leeyahay dheecaan wanaagsan. Nidaamka Biyaha - xaalada xun ee braunkola sii kordhayaSidaa darteed, haddii goobtaadu ay ku taal dooxada hoose, waxaa fiican in la dhiso sariir sir ah oo sare loogu qaado koritaanka dalagga.
Nidaamka beeritaanka kaabajka ee kale wuxuu ku xiran yahay noocyada aad doorato, laakiin xaalad kasta, warshad kasta waa in la siiyaa "meel bannaan" si ay masaafada ugu dhow ee deriska ugu jirto ugu yaraan 0.4 m, iyo faafinta noocyo badan.
Qoyaanka for geedo u baahan yihiin si ay u qodaan qoto dheer, sidaas darteed ka hor inta loo wareejiyo hoose ee godka la gelin karaa bacarimiso.
Sida dharka ugu sareeya, digada qoyan iyo qoryaha qoryaha, iyo sidoo kale qanjaruufo nitrophoska, waa ku habboon yihiin.
Si fiican u daadi sagxadda isku darka godka, ku dhex shub geedo ama dhoobo dhoobo ah, iyaga ku rush aad carrada qoyan oo qoyan si taxadar leh u jooji si aan lahayn godadka hawada ee godka.
Waa muhiim! Haddii aad wali ku guuldareysato inaad xisaabiso wakhtigii abuurka abuuray, geedo farabadan oo aad u sarreeya, xasilooni intaa ka sii weyn, waa inay duurka ka dhigaan wax yar oo ka badan ciidda si dusha sare ee ciidda ay ku taal heerka caleemaha kowaad.
Dhinaca sare ee godka waxaan ku shubi doonaa dhul engegan si markaa qalajiyo ciidda ma imanayso buro.
Daryeel iyo beerista kale ee kaabajka beerta
Iyada oo xulashada saxda ah ee ciidda, meel loogu talagalay sariiraha iyo ixtiraamka fogaanta u dhexeeya dhirta, kaabajka kale si dhakhso ah u koraa oo uma baahna daryeel gaar ah. Laakiin waxaa jira shuruudo, ilaalinta taas oo si fudud lagama maarmaanka u ah koritaanka wanaagsan ee dhaqankan. Midda ugu muhiimsan waa waraabinta.
Mararka qaar way adag tahay in xagaaga aan la aqoon oo ku haboon baahida loo qabo qulqulka qoyaanka, maxaa yeelay labadaba xoogga ciriiriga iyo yaraanta geedka ayaa si siman u dulqaadan kara.
Si aan loogu qaldamin, ciidda ku wareegsan baadiyaha waa inay noqotaa marar badan loosen: Tani waa habka kaliya ee si cad loo arki karo marka ciidda ay qalalan tahay, maxaa yeelay adoo leh qolof qalalan oo dusha sare ah, xididdada geedka ayaa kareemayn kara biyaha taagan. Tirada biyaha waa in la kordhiyaa sida ugu dhakhsaha badan geedo ugu dambeyntii bilaabaan oo si firfircoon u bilaabaan inay koraan.
Ma taqaanaa? Haddii aadan biyuhu ku dhaafin laba toddobaad ka hor goosashada ugu dambeysa, waxaa la keydin doonaa waqti dheer, iyo qiyaasta fibreefiga cufan ee caleemaha waxay noqon doontaa mid aad u sareeya.
Tan iyo markii la yidhi, caleemaha cirridka ah ee saxarada ayaa laga goyn karaa duurka dhowr jeer xilli, xayndaabka kor lagu soo sheegay ma noqon karaan kuwo si joogto ah loo ogaado: inta lagu jiro xagaaga dhirta waxay u baahan tahay waraabinta joogtada ah, fasaxna waa in la sameeyo kaliya xilliga dayrta, ka hor "xiritaan" . Biyaha sariirta waa inay ahaadaan fiidkii, haddii kale qorraxda qoraxda, waxay ku dhacdaa dhibcaha biyaha ee ku haray caleemaha, waxay keenaan gubasho, taas oo si weyn u dhaawici karta geedka.
Xaaladda kale ee muhiim u ah goosashada wanaagsan - dhirta joogto ah. Kaabashka, gaar ahaan inta lagu jiro toddobaadka ugu horreeya ka dib markii laga beerto dhul furan, waa mid aad uga masayrsan joogitaanka haramaha soo dhow.
Herbicides sida Hurricane Forte, Zencore, Reglon Super, Agrokiller, Ground, Lontrel-300, Roundup, Lazurit, Titus ayaa kaa caawin doona xakamaynta cawska.
Sidaa darteed, haddii aanay suurtagal ahayn in la kormeero nadiif ah ee ciidda, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo mulching.
Loosin iyo hilling ciidda
Ciidda ku xeeran baadiyaha waa inay had iyo jeer noqoto dabacsanaan, waxaa muhiim ah in la daboolo ka dib markii la waraabiyo, sababtoo ah, qalajinta, ciidda waxay sameeyaan qolof ah cufan, ka dibna bilaaba inuu jabo. Roobkani wuxuu ka hortagaa dhirta neefsashada, qoyaanka wuxuu ka baxaa dildilaaca. Kaabashka wanaagsan oo awood leh ayaa koraa marka dhulku ku wareegsan yahay. Nidaamka ugu horeeya waa in la sameeyaa marka dhirta ay koraan labo mitir oo mitir, oo ku celceli dhowr jeer inta lagu jiro xilliga xagaaga sida loo baahdo.
U hoggaansanaanta sharciyadan fudud ayaa sidoo kale qayb ka ah ka hortagga cudurada fangas ee kaabash.
Bacriminta waxaa la sameeyaa wax ka badan hal mar lixdii toddobaadba mar. Haddii ciidda si fiican loogu diyaargaroobey beeritaanka brauncol xilliga dayrta, inta lagu jiro xilliga xagaaga waxaa ku filan in ay qabato laba waxyaalood oo loogu talagalay kaabajka.
Of macdanta, kaabajka gaar ahaan u baahan yahay nitrogen iyo potassium, iyo ka soo organics waxay si fiican u soocaan compost dareere ah.
Waa muhiim! Bacriminta waxaa laga dalbadaa ciidda qoyan, haddii kale xididdada dhirta waxaa laga yaabaa inay ku dhacdo gubasho kiimiko ah.
Ilaalinta cayayaan iyo cayayaan
Kale, sida kaabajka, ayaa u nugul weerarrada cayayaanka iyo cudurada fangas. Sida ugu fiican ee loola macaamili karo waa ka hortagis.
Si loo dhamaystiro, marka la eego in braungola caleemo saaran yahay miisaanka oo dhan inta lagu jiro xilliga xagaaga, waxa fiican inaad isticmaasho kiimikada sunta ah, hase yeeshee nabdoon - macalimiin ama farsamooyin dad ah: xalinta saabuunta, fuska dhirta kala duwan (geedka dhoobada, toonta iyo waxyaabo badan oo kale oo liddi ku ah antiseptics).
Braunkol wuxuu u taagan yahay noocyo kala duwan oo tufaax ah oo kala duwan, laakiin guud ahaan waxaa la sheegi karaa in laba iyo badh ilaa saddex bilood ka dib beeridda miraha ama nus dhan laba iyo badh bilood ka dib markii laga beerto geedo sariirta waxaad heli kartaa goosashada wanaagsan.
Calaamadi: waxaad bilaabi kartaa jarista caleenta saladh marka uu dhirta gaadho dherer ugu yaraan 20 cm. First of dhan, caleemaha ka baaluq badan yihiin la gooyaa, sidaas darteed waxay u fududaan doontaa geedka si ay u soo kabsadaan. Intaa waxaa dheer, isku day in aad qaadato waxoogaa yar oo ka mid ah baadiyaha si aysan u lumin dhamaan cagaarka cagaaran.
Haddii aysan suurtagal ahayn, waa lagama maarmaan in laga tago ugu yaraan 5 sm oo ka hooseeya dhulka, ka dibna caleemaha cusub ayaa ka soo baxaya, iyo geedka ma dhiman doono.
Waa muhiim! Kaabashka weyn ee caleemaha ayaa lumiya jilcintooda iyo helitaanka qadhaadh, sidaa daraadeed waa wax aan loo baahnayn in la goosto goosashada.
Nadiifinta ugu dambeysa waxaa la sameeyaa ka dib markii uu barafoobay ugu horreeyey. Uma oggolaan kartid kariimka inuu barafeeyo, haddii kale caleemuhu waxay lumin doonaan dhammaan soo jiidashada.
Tallaabada ugu horreysa waa in la isticmaalo caleemo yaryar oo waxyeelo leh, sheybaarka la xushay ayaa loo kaydin karaa waqti dheer.
Meesha ugu fiican ee lagu kaydiyo kale - maqaasiinka: waxay u baahan tahay heerkulka hoose, qoyaan badan iyo hawo wanaagsan. Waxaa jira dhowr habab oo lagu keydiyo: in la saaro hal lakab, oo lagu xidho ama lagu duubo fargeeto kasta oo wargeys ah. Si ka duwan sida kaabajka cad, kale ma awoodi doono in loo hayo cusub oo muddo dheer ku filan, geedka ma fududeyn loogu talagalay this. Hab wanaagsan oo loo hubiyo in beergooyska muddada dheer socdo waa lagu keydiyaa.
Kaluun kale - dalag aad u khudradda leh, oo leh tiro badan oo faa'iido leh xataa marka la barbar dhigo kaabajka kale.
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan - Waxyaabaha kiimikada ee gaarka ah, awood u leh "soo kabsashada" ka dib goosashada iyo xitaa koraan sida a perennial, iyo sidoo kale fudud ee qaraabada ee daryeelka iyo dhadhanka aad u fiican.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Kaabashka sii kordhaya 2020